Na-enyocha Injin Na-achọ Ọ bụrụ na Use Na-eji Drupal Eme Ihe | Martech Zone
Usoro Nhazi Ọdịnaya na SEO
Ego ole ka Usoro Nchịkwa Ọdịnaya (CMS), dị ka WordPress, Drupal, Joomla!, keere òkè na search engine njikarịcha (SEO)? O doro anya na imepụta saịtị ọjọọ (ọ bụghị nhichapụ dị ọcha, ọdịnaya dị njọ, iji ojiji aha ngalaba, wdg) na CMS dị ka Drupal na-aga imetụta SEO (nnukwu ngwaọrụ eji na echiche ọjọọ). Mana usoro njikwa ọdịnaya n'onwe ha na-agbazinye SEO ka mma karịa ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na emechara omume ọma ndị ọzọ niile? Na, olee otu agwakọta sistemụ (ex, WordPress ma ọ bụ Drupal blog na-akwado Shopify saịtị) emetụta SEO (ọzọ na-eche na ndị ọzọ niile dị mma SEO omume na-agbaso)?
Site na nyocha nyocha ọchụchọ, ọdịghị ọdịiche dị n'etiti Drupal, WordPress, ma ọ bụ Shopify. Tupu m kụrụ na “Chere obere oge”, ka m dokwuo anya. Nchọgharị ọchụchọ na-ele HTML anya na-enyere ha aka mgbe ha na-egwu njikọ. Ha anaghị eleba anya na nchekwa data dị n’azụ weebụsaịtị ahụ ma ha anaghị ele anya na peeji nchịkwa ha ejiri hazie saịtị ahụ. Ihe engines na-enyocha na-enyocha HTML, ma ọ bụ sụgharịrị ya, site na usoro njikwa ọdịnaya.
Ọmụmaatụ: Mgbe ị na-eji Drupal, ị ga-ahọrọ nke ịgbanwuo dị ọcha URLS. Ikwesighi iji URL dị ọcha, mana mgbe ịmechara, ị ga-enweta URL nke mmadụ nwere ike ịghọta (ex: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / ịgba izu / ịzụ ahịa). Na, ee, URL dị ọcha nwere ike inyere SEO aka.
Ihe omuma atu ozo: Drupal, site na ya Pathauto usoro, ga - emepụta URL ndị bara uru dabere na aha peeji ahụ. Dịka ọmụmaatụ, peeji nke akpọrọ "Ihe Omume Iri 10 Maka Kidsmụ Gị" ga-enweta URL ozugbo http://example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Ikwesighi iji Pathauto mana ikwesiri ka o nyere aka mee ka ibe URL dị mfe maka ndị mmadụ ịgụ na icheta.
Ikpeazụ atụ: Maapụ saịtị nyere engines ọchụchọ aka ịghọta ihe dị na saịtị gị. Ọ bụ ezie na ịnwere ike iji aka mepụta (ug) maapụ saịtị ma nyefee ya na Google ma ọ bụ Bing, ọ bụ ọrụ dabara adaba na kọmputa. Drupal si XML Sitemap modul bụ a kwesịrị inwe dị ka ọ na-akpaghị aka site na-ekwusi na saịtị map faịlụ na awade ikike n'okpuru ha search engines.
Google ma ọ bụ Bing enweghị mmasị na ma ị na-eji Drupal, ihe niile ha na-eche bụ mbupụta nke Drupal. Mana ịchọrọ nlekọta banyere iji Drupal, ebe ọ bụ ngwá ọrụ na-eme ka ọ dị mfe usoro nke ịmepụta SEO enyi na enyi HTML na URLs.
Na nkenke… Drupal bụ naanị ngwaọrụ. Ọ ga-enye atụmatụ na arụmọrụ dị mkpa ịtọlite ​​ma gbaa weebụsaịtị. Ọ gaghị edegara gị nnukwu ederede. Nke ahụ ka dị gị n’aka. Otu ihe ị nwere ike ime iji metụta ọkwa SEO ọ bụla nwere ozi edere nke ọma, nke nwere isi ya, ma mekwaa ya oge niile.
Tags: CMSusoro njikwa ọdịnayaDrupaldrupal njikarịcha njikwanke ọmaA
Ikwuru eziokwu, John… engines na-echeghị ihe CMS bụ. Agbanyeghị, mgbe mụ na ọtụtụ sistemụ njikwa ọdịnaya rụọ ọrụ, enwere m ike ịgwa gị na enwere ọtụtụ usoro ochie ndị dị na ahịa na-enweghị atụmatụ dị mkpa iji bulie ha nke ọma. Ikike imelite robots.txt, sitemaps.xml, pinging na search engines, formatting peeji nke (na-enweghị okpokoro okpokoro), optimizing for page ọsọ, imelite meta data… ị ga-ahụ na ọtụtụ ọdịnaya management usoro constrain their users. N'ihi ya, onye ahịa ahụ na-arụsi ọrụ ike na ọdịnaya anaghị arụ ọrụ zuru oke.
Right nọ na, John. Aghọtara m ọtụtụ ajụjụ na Quora na ndị ọzọ nke CMS kachasị mma maka SEO. Azịza ya bụ naanị banyere sistemụ njikwa ọdịnaya ọ bụla nwere ikike ịme URL dị ọcha ma jiri ọtụtụ ngwaọrụ injin ọchụchọ chọrọ iji.
@Doug - i dikwa nke oma. Usoro ihe eji eme ọdịnaya ka ochie anaghị enwekarị ike itinye aka na SEO.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọbụlagodi CMS nke oge a nwere ike ịnwe mmetụta na-adịghị mma, ma ọ bụ opekata mpe, na erughị nsonaazụ kacha mma na SEO.
Dịka ọmụmaatụ, Joomla, nwere nhazi nhazi maka imepụta saịtị meta nkọwapụta nke a ga-etinye na ibe ọ bụla ebe onye edemede anaghị emepụta nkọwapụta meta. Nke a emeela ụfọdụ ndị ahịa m ka ha chee na ọ dịghị ha mkpa ịmepụta nkọwa kachasị maka ibe ahụ.
Maka onye edemede ọdịnaya nwere oge, nke a agaghị abụ nsogbu. Agbanyeghị, sistemụ njikwa ọdịnaya niile na-agbada maka ndị na-ede akwụkwọ, na-enyere ndị ode akwụkwọ aka-enwechaghị ike itinye aka na ọdịnaya nke ha, n'amaghị ịma banyere njikarịcha.
Ọkt 21, 2011 na 1:10 AM
Ọfọn CMS na-emepụta HTML nke mere na ha metụtara SEO. Drupal bụ ihe mgbu zuru ezu iji hazie nke ọma maka SEO, maka ihe ọ bụla ị nwere ike ịhọrọ. xml sitemaps, URLs enyi na enyi (mgbe niile na-alaghachi / node), URL ndị nweere onwe ha / aha peeji / isiokwu, img alt tags, blogging (emela ka m bido, ịde blọgụ na Drupal enweghị ihe ọ bụla na WP).
Anyị hụrụ Drupal n'anya maka nnukwu saịtị, mana ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ SEO'ify. WP dị mfe karịa.